Waxaa jira qaar ka mid ah filimada runtii xiiso ka soo baxay qeybtii labaad ee 2014 ee 3D. Qaar ka mid ah ku farxi doonaa carruurta da 'kasta, halka qaar kalena waa hubaal in ay ka farxiyaan taageerayaasha filim action ah. Weli kuwo kale waxay noqon doonaan kaliya waxa Addomahaaga Con maadda ah ayaa la sugayo. Halkan waxaa ku qoran toban filimada cusub 3D inay isha ku hay.
1. Beyond Edge ah
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - July 4. movie muujinaysaa fuulid taariikhiga ah ee Mt. Everest by Tenzing Norgay iyo Sir Edmund Hillary ee 1953. fuulid Taasi waxay ahayd diiwaan shirkii ugu horeeyay ee si guul leh Everest ee taariikhda. Ay hormuudka ay jidka u bannaysay u fuulto kasta oo iyaga ka dib, oo technology ee fuulitaanka buurta ayaa si weyn u bedelay iyadoo ay sabab u ascents kuwa. Saamaynta 3D ah film waxa ay daawadayaasha galay fuulid iyo ha dareensan in aan biimayno iyo sidoo kale rush adrenaline of view ka sareeya dunida ka. Qaar ka mid ah sawirrada fuulid dhabta ah waxaa lagu daray sheeko ah.
2. Dawn oo ka mid ah Planet ee ku nidhi ka
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - July 11. ugu dambeeyay ee Planet oo ka mid ah filimada la fageeyo socota Kaysar sida uu horseedaa dalka oo dhan ah oo la fageeyo ah. Aadanuhu kuwaas oo ka badbaaday fidaayey ee virus dilaa ah toban sano ka hor lagu soo gumeysi. Labada kooxood ee waa in kasta oo kale oo qaban, iyo rajo taas waa la ciyaaray, iyadoo ay adag tahay sida aad qiyaasi lahaa, iyadoo Madaxdii Gaalowday oo dagaal joogta ah. Shineemada xaqse oo costuming gaar ah kayeel mid ugu macquul weli.
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - July 25 Xiddigii hore ee weyn ee Hercules helo daaweyn 3D la Rock, Dwayne Johnson, in door horyaalka. Movie Tani waxay ka bilaabataa ka dib markii laba iyo toban hawshootay markii Boqorka Thrace ugu baaqeysaa Hercules oo uu urur ka mid ah lixdii si ay u caawiyaan jabiyaan col ku dhaarteen. The Muuqaallo dagaal 3D hubin in ay aad u daran ee sheeko ah Qisada awaalka.
4. Ilaaliyaha Galaxy
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - August 1. In dunida ka mid ah buugaagta sheekooyinka maadda ah, la yaabin taliya sarreeya. Maadda ugu dambeeyey ka dhacay shaashadda weyn sidoo kale waxay leedahay waqti-weyn ee kabka, oo ay ku jiraan Benicio Del Torino, Vin Diesel, Chris Pine, iyo Zoe Saldana. An American, Peter Quill aka Star Eebihiin, qaadataa orb ka Ronan sharka, laakiin sida laga fili lahayd, Ronan dib u doonayo. Quill qorta kooxda ka in uu gacan ka dagaalamaan Ronan, koox lagu naaneeso Ilaaliyaha Galaxy. Dhibcaha ay kaftan, tani ma aha film ku saabsan band caadiga ah ee atoore.
5. Step Up: In All
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - August 8. Tani waa markii shanaad ee Step Up ah filimada muuqan cayaar cajiib ah. Version Tani waxay ka dhici tartan Las Vegas dib u soo celinaya dadka muhiimka ah ee filimada hore, inkastoo Channing Tatum mid ka mid ah ma noqon doonto. Tartanka ayaa waxaa la qabtaa si aad u hesho koox dad ah si ay u qabtaan ee Valhalla Hotel khayaal ah. Winners hesho heshiis seddex sanno ah.
6. qaangaadhin Mutant Ninja qoolley
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - August 8. Tan sheeko of Qisada ka mid ah xamaarato 80s caanka ah waa badan madow badan asalka ah halkii lighthearted. Xumaan qabsaday New York, iyo Renaissance ragga dhallinyarada ah artist-magacaabay leeyihiin sacabbadiisana ka buuxsadaa dayeen inay badbaadiyaan magaalada ka Shredder iyo burcad. Soosaare Michael Bay ayaa cadaadis uu saaran qaar ka mid ah go'aanada uu sameeyey oo la xiriira filimkan, laakiin taageerayaasha dhagxbaa hubaal waa jeclaan doonaa mar kale si ay u arkaan Donatello, Michelangelo, Leonardo, iyo Raphael, wada jir ah ula reporter hami ka shaqeeya si ay u arkaan cadaaladda adkaan.
7. Sin City - A Dame inuu ku dilo ee
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - August 22. celinta caanka ah taxane sheeko graphic in shaashadda weyn ee 3D sii daayo a xagaaga dambe. Focus Ra'iisul ayaa loogu baaqey in ay bixiyaan saamaynta muuqaal ah ee filimka, kaas oo noqon doona sida filimkii ugu horeeyay oo u eg a live-tallaabo sheeko graphic. Movie The dhab ahaantii waxay koobi saddex dabaqadood gaaban doonaa. Movie Tani ma aha in la dhaqday midna waa caruurta.
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - October 17. Guillermo del Torino Helms tan iminka movie. Waa Qisada midabo kartoon ah ee Manolo iyo adventures uu marayo saddex Caalamka gaar ah sida uu isku dayo in uu dib u shaqeeyo isaga oo ku socda jacaylka naftiisa. Dhinacyada sida uu barto in uu ka adkaan cabsi iyo go'aan ka gaarto waxa uu doonayo inuu sameeyo markii uu soo laabtay. Filimka oo uu leeyahay soundtrack xiiso leh si ay u raaco, oo ay ku jiraan kuwan raadkaygay by guumays City. The dhamaan xiddigaha waxaa madax u Channing Tatum iyo Zoe Saldana, laakiin waxa ay sidoo kale Ron Perlman, Christina Applegate, iyo Ice Cube.
9. pingvin 'ee Madagascar
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - November 26 Just waqtiga fasaxa, nooca ugu dambeeya ee taxanaha Madagascar ee Ugu Horeeyay doonaa, waqtigan soo bandhigay pingvin u qosol badan - Skipper, Kowalski, Private, oo Rico. Sida filimada kale, tani waa CGI filim dhaceen iyo mid ka mid ah filimada ugu dambeeyay 3D ee sanadka. Pingvin 'The heli naftooda aad faraha la gasho ergada gaar ah North Wind si ay u joojiyaan dhakhtar shar leh oo xagga fulinta qorshaha si ay ula wareegaan caalamka. Kabtan, dabcan, wuxuu jid gaar ah oo wax ka qabashada.
10. Hobbit: The Battle of the Shan ciidammada
Taariikhda lagu sii daynayo qabtay - December 17. Tani wajigeeda sadexaad ku salaysan kitaabka hore ee Eebaha taxane siddooyinka diiradda saari doonaa sida Dwarves iyo Bilbo Baggins ka Smaug qaadan doonaan dib Erebor. Kabka xiddig qoreysa Christopher Lee reprising doorkiisa Saruman iyo Ian McKellen sida Gandalf. Orlando Bloom ayaa sidoo kale ku soo laabtay, sida uu yahay Martin sida Bilbo Freeman. Benedict Cumberbatch biiray kabka sida Smaug. The movie ugu dambeeyay 3D sanadka dhab ahaan qof huwan doonaa sano weyn filimada.
Top Sagaal Xilisoft 3D Video Converter lagu bedelan karo
Top Toban 3D Video Kaameerada
Top 5 talooyin aad u baahan tahay wax ka ogaato aan taariikhqorihii screen
Sida loo Edit Video on YouTube
Si layaab leh u soo noqda maalin walba Videos galay cajiib Home Movies
> Resource > Video > Top Toban 3D Movies in Raadi qeybtii labaad ee 2014